Xiisaddii u dhaxaysay Iran iyo Maraykanka oo Cirka isku shareertay – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Xiisaddii u dhaxaysay Iran iyo Maraykanka oo Cirka isku shareertay
Xiisaddii u dhaxaysay Iran iyo Maraykanka oo Cirka isku shareertay
Wasiirka arrimaha dibedda ee Dalka Iran, Mohammad Javad Zarif, ayaa si weyn u dhaleeceeyay dilka Madaxii Ciiadamada xulka ah ee Qudus Force, Janaraal; Qasem Soleiman, ku xigeenkiisa, Abu Mahdi al-Muhandis iyo Saraakiil la socotay, isagoo ku tilmaantay fal Argagixisanimo.
Dilka Sarkaalkan ayaa sare usii qaaday xiisaddii siyaasadeed ee u dhaxaysay Dowladaha Maraykanka iyo Iran , waxayna xukuumadda Tehraan wacad ku martay in ay jawaab ka bixin doonto dilka Janaraal; Qasem Soleiman.
Hoggaamiyaha Ruuxiga ah ee Dal Iran, Ayatullah Ali Khamanei, ayaa sheegay in dambiilayaasha oo uu ula jeedo Maraykanka ay sugeyso aargudasho ba’an.
Saraakiil ka tirsan Pentagon-ka ayaa waxay sheegeen in dilkani uu amray Madaxweynaha Dalka Maraykanka Donald Trump, iyagoo intaa ku daray in uu beegsigoodu ahaa mr; Soleiman iyo xubnaha la shaqeeya.
Dhinaca kale, Dowladda Isra’il ayaa heegan buuxa gelisay Ciidamadeeda kala duwan, iaydoo ka cabsi qabta in ay weerarro kaga yimaaddaan xagga Iran iyo kooxaha Hubeysan ee Gacan saarka la leh Dowladda Tehraan.
Safaaradda Mareykanka ee Magaalada Baqdaad ayaa ugu baaqday in muwaadiniinta Mareykanka ay si deg-deg ah uga baxaan dalka Ciraaq.
Bariga dhexe ayaa guud ahaan laga dareemayaa feejignaa dheeri ah, iyadoo uu sicirka Shidaalkuna sare u kacay xiisadda jirta awgeed.
Mucaaradka MW Axmed Madoobe oo Muqdisho ku shiraya & MW Farmaajo...
Sirdoonka Kenya oo sheegay in Al-shabaab qorsheynayaan weerarro ay ka...